बग वा क्यास - सही अवधि के हो?
पशु र प्रकृति कीराहरू पहिचान गर्दै
हरेक बग साँचो बग होईन
बग शब्द प्राय: सामान्य शब्दको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जुन कुनै पनि प्रकारको सानो क्रलिङ मानदण्डमा उल्लेख गरिएको छ, र यो केवल बच्चा र अनावश्यक वयस्कहरू जसले यस तरिकाको शब्द प्रयोग गर्दछन्। धेरै वैज्ञानिक विशेषज्ञहरू, प्रशिक्षित ईमोलोजिस्टहरू पनि "बग" शब्द प्रयोग गरी सानो प्राणीहरूको सन्दर्भमा प्रयोग गर्नेछन्, विशेष गरी जब तिनीहरू सामान्य जनतासँग कुराकानी गर्दैछन्।
बगको प्राविधिक परिभाषा
प्राविधिक रूपले, या करुणुशलतापूर्वक, एक बग एक प्राणी हो जुन कीरा क्रमको हेम्पाटर , सामान्य कुराहरु को लागी सामान्य बगिन्छ।
Aphids , cicadas , हत्यारा बगहरू , चींटीहरू र अन्य किनेका अन्य किस्महरूले हेम्पाटरको क्रममा सही सदस्यताको दावी गर्न सक्छन्।
साँचो बगहरू तिनीहरूका मालिकहरूका प्रकारहरू द्वारा परिभाषित गरिन्छ, जुन भेदी र चिसोको लागि परिमार्जित गरिन्छ। यो अर्डरका थुप्रै सदस्यहरू पौधेको तरलमा खुवाउँछन्, र त्यसो भए तिनीहरूका मुखहरू संरचना संयोजक ऊतक घुसाउन आवश्यक छन्। केहि हिप्पिटरहरू जस्तै डाइफिडले यस तरिकामा खाना खाएर बिरुवालाई हानिकारक बनाउन वा मार्न सक्छ।
हेपाप्टरान्सहरू , साँचो कीराहरूमा पखेटाहरू, बायाँमा एकअर्कामाथि गुनासो गर्छन्; केही सदस्यहरू एकैछिनमा हिँड्नु पर्दैनन्। अन्तमा, साँचो कीराहरू सधैं ठोस आँखाहरू छन्।
सबै बग कीराहरू हुन्, तर सबै कीराहरू बगहरू छैनन्
आधिकारिक परिभाषाले, कीराहरूको ठूलो समूह बगहरू होइनन्, तथापि सामान्य उपयोगमा तिनीहरू प्राय: एकै लेबलको साथ एकसाथ लुम्पिएका हुन्छन्। बीटलहरू , उदाहरणका लागि, साँचो बगहरू होइनन्। बीटलहरू हेम्पिप्टेर अर्डरको साँचो बगबाट संरचनात्मक रूपमा भिन्न हुन्छन्, त्यसमा तिनीहरूका मुखपर्टहरू चिन्ताका लागि तयार पारिएको, भेला हुँदैनन्।
र बीटल, जो कोलोपेटर अर्डरको हो, माटोको पखेटाहरू जुन कडा शेल-जस्तै कीटको लागि सुरक्षा बनाउँदछ, साँचो बगहरू झिल्ली झैँ पखेटा छैन।
अन्य साधारण कीराहरू जुन कुञ्जीको रूपमा योग्य हुँदैनन् माथ, तितली, र मधुमेहहरू छन्। फेरि, यो यो कीरा को शरीर को भागहरु मा संरचनात्मक अंतर संग गर्न पर्छ।
अन्तमा, त्यहाँ धेरै सानो क्रलिंग प्राणीहरू जुन कीराहरू होइनन्, र त्यसमा आधिकारिक बगहरू हुन सक्दैनन्। उदाहरणका लागि, म्यानमा पाइने छवटा पाद र शरीर खण्ड ढाँचाहरू को लागी मिल्दैन, र यसको बजाय विभिन्न पशु अर्डरका सदस्यहरू छन् - मकईहरू अचिनो हुन्छन्, मिल्सिडिडहरू माइ्रिपाड्स हुन्। तिनीहरू डराउने, क्रुल्ल क्रिकेटरहरू हुन सक्छन्, तर तिनीहरू बगहरू छैनन्।
सबै कीराहरू र सबै सानो क्र्रालिंग प्राणीहरू "बगहरू" शब्दको एक काल्पनिक प्रयोग हो, र जब वैज्ञानिकहरू र अन्यथा ज्ञानयोग्य व्यक्तिहरूले यस्तो शब्द प्रयोग गर्छन्, तिनीहरू सामान्यतया यसलाई तल-तल र पारिवारिक रूपमा प्रयोग गर्दैछन्। धेरै अधिक सम्मानित स्रोतहरूले "बग" शब्द प्रयोग गर्दा उनीहरूले लेखिरहेका छन् वा केहि दर्शकहरूलाई सिकाउँछन्:
गिलिबर्ट वाल्डबाउर ईलिनोइस विश्वविद्यालय बाट सम्मानित इमोलोजिस्ट हो। उनले " ह्यान्डब्याग उत्तर उत्तर बुक" भनिने उत्कृष्ट भोल्युमलाई लेखकले बिच्छेदनबाट सबैलाई कवर गर्दछ र चाँदनीशिका सम्म।
केंटकीको ईन्जिनोलोजी विभाग विश्वविद्यालयले केन्टकी बग जडान भनिने वेबसाइट होस्ट गर्छ। तिनीहरू टुरर्टुलस, म्यान्सिडिज, र काक्रोच सहित पालतू बगहरू राख्ने जानकारीमा समावेश गर्दछ, जसमध्ये कुनै पनि वास्तवमा बगहरू छन्।
फ्लोरिडाको इन्टोमोलोजी विभागले "सेयरको सर्वश्रेष्ठ" पुरस्कारलाई उत्कृष्ट बृद्धि सम्बन्धी वेबसाइटहरूको सम्मान दिनुभएको छ। उनीहरूको गर्भमा भएका चीटहरू चीट, बीटल, मक्खन र तितलीहरूमा साइटहरू छन् - कुनै वास्तविक साँचो बगहरू।
आयोवा स्टेटको इमोजोमोलोजी विभागले बर्गुइडको वरिपरिका सर्वोत्तम आर्थोटोडोड साइटहरू मध्ये एक होस्ट गर्छ। साइटमा शौकिया स्वाभाविकहरू द्वारा एकत्रित जानकारी र फोटोहरूको डेटाबेस हो, लगभग हरेक उत्तर अमेरिकी अर्थोप्रोको रूपमा राखिएको छ। सूचीबद्ध प्रजातिहरूको मात्र एक सानो भाग हेपाप्टरको क्रम हो।
बग एक कीट हो, तर सबै कीराहरू बगहरू होइनन्; र केहि गैर-कीराहरु जसलाई बग भनिन्छ भनिन्छ न त बगहरू र नचाहिने कीराहरू। के अहिले सबै कुरा स्पष्ट छ?
के ती घाटहरू सफा लार्वा वा काल्पनिक?
बटरफली र मेथ बीचको फरक कुरा कसरी बताउनुहुन्छ?
10 कोट को पहिचान गर्न को तरिका
5 प्रकार को कीट Pupae
5 कोट लार्वा को प्रकार
Centipedes को बारे मा आकर्षक तथ्य
12 लाइभ कीराहरू अध्ययन गर्न उपकरणहरू हुनुपर्छ
10 Millipedes को बारे मा आकर्षक तथ्य
तपाईंको कारको Burnt-Out Bulbs लाई4सरल चरणहरूमा बदल्नुहोस्
बुद्धको समाधान अङ्गका लागि
बीहेमथ के हो?
हावा के हुन्छ?
सारा ग्रोन हाइट्स साक्षात्कारका लागि पानीको लेखक
होरोसको आँखा: एक प्राचीन मिश्र मिस्र
10 बिल्लियों को बारे मा आकर्षक तथ्य
केबीबेज पैच बच्चाहरु को इतिहास
भविष्य कसरी सिकाउनुहुन्छ
क्रिकेटमा 'कुनै बल' बुझ्न
भ्रामक दास अधिनियम
स्पेनिश - अमेरिकी युद्ध: यूएसएस माइन विस्फोट
पाँच चीजहरू बाउलिंग हुँदा के गर्न हुँदैन
महान् खेल के थियो?
अंग्रेजी निश्चित अभिव्यक्ति प्रश्नोत्तरी
1877 को ठूलो रेलवे स्ट्राइक
ड्वाइट एस्सेनवरले विश्व गोल्फ हॉल अफ फेमको चयन गरे
10 सबैभन्दा ठूलो फिलली आत्मा हिट्स
ईसामानको ईस्टरको मिति कस्तो छ?
1850 को सम्झौता एक डिफेडको लागि सिभिल युद्धलाई हरायो
"लेस ओइसेअक्स डेन्स ला आकर्षकलि" गीत, अनुवाद, इतिहास, र अधिक
कसले कारलाई इन्कार गर्यो?
Iguanodon को बारे मा तथ्य